Olole Loogu Gurmanayo Dadkii Ku Waxyeeloobay Masiibadii Qaraxii Zoobe oo Puntland Ka Bilowday-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Olole Loogu Gurmanayo Dadkii Ku Waxyeeloobay Masiibadii Qaraxii Zoobe oo Puntland Ka Bilowday-Sawiro
Olole Loogu Gurmanayo Dadkii Ku Waxyeeloobay Masiibadii Qaraxii Zoobe oo Puntland Ka Bilowday-Sawiro
October 17, 2017 - By: Cumar Mohamed
Magaalooyinka waaweyne ee Puntland waxaa ka bilowday olole loogu gurmanayo dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii masiibadda ahaa ee ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaaladda muqdisho 14kii bishan October. Kullankii ugu ballaarnaa ayaa caawa ka dhacay Masjidka weyn ee Al-rowda ee Magaaladda Bosaso, waxaana lagu ururiyay lacag gaaraysa 150 kun oo dollar.
Kullanka gurmadka ah waxaa ka qaybgalay Wasiirka arrimaha gudaha Puntland, islamarkaana ah madaxda guddiga gurmadka ee dowladda C/laahi Cali Xirsi (Timacade), Guddoomiyaha gobolka bari Yuusuf maxamed Wacays (dhado), Duqa degmadda Bosaso Yaasiin Mire Maxamuud, Guddiga culuma’udiinka Soomaaliyeed ee reer Puntland, Ganacsato, Aqoonyahano iyo dadweyne aad u farabadan, waxaana toos looga dhagaysanayay Idaacadaha maxaliga ah ee Puntland.
Shirkado waaweyn oo ay ka mid yihiin Golis iyo Dahabshil ayaa lacago ku yaboohay, waxaa kaloo lacago ku deeqay shakhsiyaad uu ka mid yahay Madaxweynaha Puntland, waxayna u kala bixiyeen sidatan:
Madaxweyne Cabdiweli Gaas wuxuu ku deeqay $10,000kun oo dollar,
Shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Golis waxay ku deeqeen $10,000 kun doolar,
shirkada Dahabshil waxay ku deeqday $30,000 kun oo dollar.
Jaamacadda Bariga Afrika waxay ku deeqday $5000.
Boqolaal shacabka ku nool magaalooyinka Puntland ayaa lacago ugu yaboohay walaalahooda dhibaatadu ay ka soo gaartay Qarax muqdisho oo ay ku dhinteen in ka badan 300 qof, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 300 kale, kuwasoo qaarkood loo qaaday dalalka dibadda si loogu soo daweeyo.
Dhinaca kale, waxaa jira olole ballaaran oo maalmaha soo socda ka bilaabanaya Xarumaha waxbarshada sida jaamacadaha, machadyada, Dugsiyadda iyo xarumaha kale ee waxbarshada oo lacago gurmad ah loogu ururinayo dadka dhibaatadu soo gaartay, sidoo kale shaqaalaha dowladda, shaqaalaha rayidka ah ee Puntland iyo xarumaha ganacsiga ayaa laga filayaa inay ku tabarucaan dhaqaale gurmad.
Kullan Ka dhacay Rugta Ganacsiga Puntland.
Xarunta rugta ganacsiga Puntland waxaa maanta isugu yimid kulan xubno ka tirsan gollaha wasiiradda Puntland, Ganacsatada, Haweenka, dhalinyarada iyo Saxaafadda. kulanka ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo isugu xiri lahaa dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshadda ee ka shaqeeya inay u gurmadaan dadka walaalahooda ah ee qaraxa masiibada ah uu waxyeeleeyay, Waxaan kullanka lagu qaybsaday howsha gurmadka, iyadoo loo sameeyay hal Akoon oo lagu soo aadiyo tabarucaadka bulshadda.
Dhinac kale, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kullan aan caadi ahayn isugu yeeray golihiisa wasiirada Puntland, kulankaas ayaa looga arrinsanayey qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14 october 2017 iyo sidii gurmad deg deg ah loo gaadhsiin lahaa dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay.
Wuxuu sheegay madaxweynaha Puntland in dadka reer Puntland si mug leh uga qaybqaadan doonaan taageerada walaalahooda ay dhibtu ka soo gaartay qaraxii muqdisho. Waxaana uu sheegay in maalinta beri ay dowladda Puntland ay u diri doonto magaaladda Muqdisho Diyaarad sida gargaarkii ugu horeeyey oo ka kooban daawooyin, dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal caafimaad, kuwasoo si deg deg ah uga hawlgali doono gargaarka loo fidinayo dadkaas waxyeeladu soo gaartey.